Iràna · Marsa, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Iràna · Marsa, 2019
Tantara mikasika ny Iràna tamin'ny Marsa, 2019
Lalàna27 Marsa 2019
Vaovao farany momba an'i Hoder
Mediam-bahoaka22 Marsa 2019
Nisy tranonkala sy bilaogy nanoratra tao anatin'ny andro vitsivitsy fa nosamborina i Hossein Derakhshan, Hoder. Nilaza zavatra roa hanaporofoana izany tamin'ny filazana toy izao izy rehetra ireo: ny tatitra avy amin'ny tranokalam-baovao Iraniana Jahan News sy ny zava-misy fa tsy nanavao ny bilaoginy nandritra ny 2 herinandro i Hoder.
Fahalalahàna miteny19 Marsa 2019
Iran: Bilaogera iray hafa nosamborina
Mediam-bahoaka16 Marsa 2019
Nosamborina i Nama Jafari, bilaogera sady mpanao gazety. Toniandahatsoratra tao amin'ny tranonkala ara-kolotsaina iray izy. Nanoratra boky iray ihany koa izy izay mitondra ny lohateny hoe "fivoriana tao amin'ny toeram-pigadrana mitoka-monina".
Iran: nosamborina indray i Khazali
Mediam-bahoaka15 Marsa 2019
Nitatitra i Shoorezar fa nosamborina indray tamin'ny herinandro lasa teo i Mehdi Khazali, bilaogera, mpamoaka lahatsoratra sady zanaka lahin'ilay mpitondra fivavahana malaza mpandala ny fivavahana sady mpikambana teo aloha tao amin'ny Vaomieran'ny Mpiambina, Ayatollah Khazali.
Hafanam-po14 Marsa 2019
Mediam-bahoaka12 Marsa 2019
Mediam-bahoaka11 Marsa 2019